Bulsho Lagu Gumaysto Khuraafaad | Warsugan News
Home Wararka Bulsho Lagu Gumaysto Khuraafaad
Bulsho Lagu Gumaysto Khuraafaad
Dalka Hindiya waa dalka ay ka jiraan dhaqamo iyo caadooyin yaab leh oo qaarkood aan qofku rumaysan Karin. Waa dal lo’ada lagu caabudo oo aan hilibkeeda lagu cuni Karin, waana dal haddana kaadida lagu cabu iyadoo loo arka caafimaad iyo in xanuunada lagaga bogsanayo sida kansarka iyo xanuuno kale oo halis ah.
Hindiya waxa ku nool bulsho aaminsan dhaqan diimeed wax ay ugu yeedhaan “ Naga Sadhus” , Bulshadaasi ragoodu dhar ma xidhaan, mana maydhaan isla markaana dhamaan timaha ka baxa jidhkooda ma ogola in wax yarna laga jaro. Waxa kale oo raggu ay dhib ku hayaan xubinta taranka ee jidhkooda iyagoo doonaya in aanu dareen yeelan,taasi oo ay u arkaan denbi. Naga Sadhu qofku kuma noqdo wakhti kooban waxa uu maraa dariiq dheer oo ay ugu horayso in marka hore uu noqdo raahib dunida iska tegay oo go’doon kaga jira.
Previous articleBurco oo u diyaar garoobaysa olale nafadeed oo dhammaystiran
Next articleHargeysa: Ciidanka Booliska oo Qabtay Maandooriye si layaable loo soo Galiyay Dalk